SandPebblesTours အတူ Raja စခဲ့ပြီး Festival of အခါသမယကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုး
သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels မှစ. အထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူ Odisha ခုနှစ်တွင် Raja စခဲ့ပြီး Festival of အခါသမယကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုး
Odisha - အိန္ဒိယ၏အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်, အမြဲယင်း၏ရှေးဟောင်းတန်ဖိုးများနှင့်အစဉ်အလာမှစစ်မှန်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသည်, & လူကြိုက်များသောဒေသခံပွဲတော်များ၎င်း၏တက်ကြွယဉ်ကျေးမှုနှင့်အိမ်ရှင်အဘို့ရှိသမျှကိုကမ္ဘာအဝှမ်းမှလူသိများသည်။ နာမည်ကျော် Raja ပွဲတော်စတင်သောအခါအသို့သော်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရပျ၏အစဉ်အလာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုက၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အချိန်ပါပဲ။
အဆိုပါ Raja ပွဲတော်
"Raja Parba" သို့မဟုတ် "Raja" - ကအသံကြောင့်အတိအကျတူညီပါတယ်။ ဒါဟာဇွန်လ၏နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်း Odisha အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့နာမည်ကျော်သုံးရက်ကြာပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့င်း၏ဒုတိယနေ့ရက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလ Mithuna ၏အစအဦးခြေတစ်လှမ်းနေစဉ်မိခင်နတ်ဘုရားမကမ္ဘာမြေ, ထိုပွဲတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး3နေ့ရက်ကာလ၌ရာသီခြင်းကိုသည်းခံသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ မိုးရာသီအတွက်သတ်မှတ်တဲ့အခါပါပဲ။
အစားအစာ, ပျော်စရာ, & ပိုပြီးမှတျအပွောငျးအလဲ & ​​သီချင်းတွေကို မှစ. , ပွဲလမ်းသဘင်အခါသမယလုပ်ဖို့အရာတစ်ဦး smorgasbord မှုအဟောင်းနှင့်အသစ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာပေးထားပါတယ်။ ဆက်ဆက်ကြောင့်အခြားအဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်အားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံကိုပါပဲ။
ဒီ3နေ့ပွဲတော်ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အိမ်ထောင်စုအိမ်မှုဝေယျာကနေအနားယူရ & ဟာမိုးလုံလေလုံ & ပြင်ပဂိမ်းအချို့ပျော်မွေ့။ မိန်းကလေးများနောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ထံမှအသစ်သောအရာတစ်ခုခုဝတ်ထားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ခြေ Agatha နှင့်အတူရိုးရာ Sarees ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဤအချိန်လေးမြတ်နိုးဖို့ကိုချစ် & ဘယ်သူမှမြေကြီးပေါ်မှာဘိနပ်မပါသောလမ်းလျှောက်။
ကောင်းပြီ, ရှိသမျှအထက်, ထိုစဉ်က Odisha ခရီးသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မ သဲကျောက်စရစ်နှင့်အတူ Raja ပွဲတော် tour N ကို Travels! ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing, သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels သငျသညျကိုမှန်ကန်ပွဲတော်သို့တစ်ခံစားမှုရှိစေလော့% လျှော့စျေး 10 မှတက်ရာပူဇော်သက္ကာကို။ အားလုံးထက်ပို 60 branded ဇိမ်ခံမော်တော်ယာဉ်များစေနှင့်အတူ, ငါတို့သည်သင်တို့သည်၎င်း၏စစ်မှန်သောအရောင်များ၌သင်တို့၏ချစ်ရသူနှင့်အတူအခမ်းအနားအသက်ရှင်ရန်ပြည်နယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသွားရောက်ကြကုန်အံ့။ နှင့်အညီ, အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတန်းစားများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု & နှစျသိမျ့ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ ကခုန်, သီချင်းဆိုခြင်း, Odisha နှင့်ကျွန်တော်မဆိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရိုးရာဂိမ်းကစားခြင်းအမှုအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇိမ်ခံခရီးသွားလာန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသင်တို့အဘို့အဖြစ်ပျက်ပါစေနေစဉ်အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုး။
ကျွန်တော်တို့ကို + 91-993.702.7574 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး sandpebblestours.com/raja-utsav-odisha အပေါ်မည်သည့်အချိန်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သင့်ရဲ့ခရီးသွားယခုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်နှင့်ပွဲလမ်းသဘင်ခရီးအပေါ်ရပြည်နယ်အတွင်းရှိလူအပေါင်းတို့သည်လူကြိုက်များအထင်ကရအဆောက်အရှာဖွေစူးစမ်း။
ခြွင်းချက်အိန္ဒိယခုနှစ်တွင်အားလပ်ရက်ခရီးသွားအထုပ်များအဖြစ်လူကြိုက်များသောအိန္ဒိယ Tours မှ
သဲကျောက်စရစ် '' နိုင်ငံတကာလှည့်လည်အထုပ်များရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ရာမှာပွိုအားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံခံစားကြည့်ပါ